လမ်းဆုံ .....: March 2010
blog တစ်ခုကို ဖန်တီးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ရှာဖွေ တွေ့ရှိချက်တွေကို ဒီနေရာလေးမှာပဲ စုစည်းဖော်ပြပေးသွားတော့်မယ်နော် ..
ReadMoe “Making Blog”
Posted by Kaung Khant at 30.3.100comments Links to this post
စာပေလောက စာအုပ်ဆိုင်ရဲ့ ဆိုဒ်ပါ ..
စာရေးဆရာတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရအောင် စီစဉ်ပေးထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်
(နဝမ) ဗန်းမော်ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ၏ ပတ္တမြားရတုနှင့် ဂုဏပူဇာ သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်း
ဗန်းမော်ဆရာတော်- ပဌာန်းဒေသနာ ၀တ်ရွတ်စဉ် တရားတော်
၁၁-၁၂-၂၀၀၉ အပ္ပါယ်ပိတ် တရားတော်
(The above video donated by Dr. U Tin Tun and Daughter Yu Thiri Htun)
၈-၁-၂၀၁၀ နိဗ္ဗာန်တံခါးဖွင့် တရားတော်
(The above video donated by dhammaransi.com webmaster Ko Myo Han)
မြတ်ပဌာန်းဒေသနာနှင့် ဝိပဿနာဥာဏ်စဉ် တရားတော်များ
ရန်ကုန်တိုင်း စမ်းချောင်းမြို့နယ် အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက် သီရိမင်္ဂလာလမ်း
ကံမြင့်ကျောင်းတိုက် ဓမ္မာရုံ တွင်ဟောကြားသည်
၁။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၁) ၅-၆-၂၀၀၉
၂။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၂) ၆-၆-၂၀၀၉
၃။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၃) ၇-၆-၂၀၀၉
၄။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၄) ၈-၆-၂၀၀၉
၅။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၅) ၉-၆-၂၀၀၉
၆။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၆) ၁၀-၆-၂၀၀၉
၇။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၇) ၁၁-၆-၂၀၀၉
၈။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၈) ၁၂-၆-၂၀၀၉
၉။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၉) ၁၃-၆-၂၀၀၉
၁၀။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၁၀) ၁၄-၆-၂၀၀၉
ကန္နိနည်းနိသယဆိုင်ရာ ဖတ်ရှုသင့်သော စာအုပ်ကောင်းများ
The above book donated by Dhammaweb.net webmaster Ko Kaung Htat Nyunt
မဟာကမ္မာဋ္ဌာနာစရိယမောင်းထောင်မြေဇင်းတောရဆရာတော်ဘုရားကြီး ဒသနပါရဂူကျမ်း နိဗ္ဗာနမဂ္ဂအာနာပါန အလုပ်ပေးတရာတော် (သမထ -ပထမပိုင်း) - (ဓမ္မာစရိယဦးဋ္ဌေးလှိုင်)
မဟာကမ္မာဋ္ဌာနာစရိယမောင်းထောင်မြေဇင်းတောရဆရာတော်ဘုရားကြီး ကန္နီနည်းဥပနိသျ ပဓာနပါရဂူကျမ်း - (ဓမ္မာစရိယဦးဋ္ဌေးလှိုင်)
အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ရ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာခရိုင်၊ ဘုတလင်းမြို့နယ် ကျေးဇူတော်ရှင် မောင်ထောင် မြေဇင်းဆရာတော်ဘုရာကြီးအား ချီးကျူးဂုဏ်ပြုဇော်အပ်သော ဂုဏပူဇာ ထေရုပတ္တနှင့် မော်ကွန်းတင်စာလွှာများ
ReadMoe “ဗန်မော်ဆရာတော် ၏ တရားတော်များ ..”
Posted by Kaung Khant at 17.3.100comments Links to this post
ဘလော့ Tamplate ကို မိမိကြိုက်သလို လုပ်ချင်ရင် ရပါပြီ
လည်းကြိုက်ကြမယ်လို့မျော်လင့်ပါတယ်၊ဘလော့ Tamplate ကိုပြောင်းဖို့ ကြောက်တဲံ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်လာပါပြီ။ဒါက တော့ဘာ Template ကိုမှဟိုရှာ ဒီရှာစ၇ာလုံးဝ ကိုမလိုတော့ဘာ ဘူးဗျာ။ မိမိရဲ့ဘလော့ Tamplate ကိုမိမိစိတ်တိုင်းကြပြောင်းတဲ့နည်းလေးလားပါပြီ.။။မိမိရဲ့ဘလော့ Template ကို http://draft.blogger.com/ ကနေဝင်ပြီးကြိုက်သလိုတာလုပ်ကြတော့ဟေ့...အ၇မ်းကိုကောင်းတယ် ဗျာ ဘလော့ဂါ သမားတွေအတွက်အ၇မ်းကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစေပါတယ်။တကယ်ကိုပျော်စ၇ာကောင်းတဲ့နည်းလမ်းသစ်လေးပါ။ ဒီအတွက်လည်းအားလုံးကိုစားအရမ်းကိုဝမ်းသာမိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အောက်မှာလုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုပုံနဲ့ လည်းပြထားသလိုသူ့ရဲ့ Youtube Video နဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်။
kp3 ရဲ့ ပို့ကို ဆက်လက်မျှဝေ ပေးပါတယ်ဗျာ ..
ReadMoe “ဘလော့ Tamplate ကို မိမိကြိုက်သလို လုပ်ချင်ရင် ရပါပြီ”
Labels: Blog, How to..
လစဉ် ထုတ်ဝေးလျှက်ရှိသည့် ကွန်ပျူတာ နည်ပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုပါ ..
အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်း အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..
ReadMoe “Knowledge Bridge Magazine”
Posted by Kaung Khant at 10.3.100comments Links to this post
Labels: Books, Webpage
Fashion ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ရန်
အကောင်းဆုံး ဆိုဒ် ၁၀ ခုကို စုစည်း တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ..
Knowledge Bridge Magazine မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
ReadMoe “10 Fashion Site”
ထူးထူးခြားခြား ရောက်လာတဲ့ ဆိုဒ်လေး တစ်ခုပါပဲဗျာ
ကျွန်တော်လည်း တွေ့တွေ့ချင်း သဘောကျတာနဲ့ ကျွန်တော့် ဆိုဒ်မှာ လင့်ချိတ်ပေးထားလိုက်ပါတယ်..
စိတ်ဝင်စားသူများရှိရင် ၀င်ကြည့်နိုင်ပါတယ်နော် ..
ReadMoe “Leprosy Help”
Posted by Kaung Khant at 9.3.100comments Links to this post
E-Major Webpage မှ ရရှိသော Webpage Link များကို ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Si Ta Gu
Ma Ha Si
The Inn Gu
Ya Wei Nwe
Shwe Hin Tha
Dhamma Duta 2
Ma Ha Si mm
A Lin Thit
Myaut Oo Sayadaw
The Light of Mm
AmE ASL Dictionary
Graffiti The Web
Annoying or Not
Geek or Not
Internet Conspiracy Generator
The Simpsons Zombie Shootout
Klington Language Institute
ဂမ္ဘီရ WebSites များ
Entrances2Hell
A Citizen from Hell
Int. Ghost Hunters Soc
Musof Non-Primate Art
The Ozone Cow
Dr Mega Volt
Corrugated Iron Club
Animal Mating Zone
Deep Black Magic
ItsFun 2B DatKandieKid
Sulabh Toilet Museum
Toe Amputation Project
နေလွမ်းသူ၊ ဉာဏ် (ကို)
Myanmar Family Forum
Myanmar Engineer Forum
Myanmar Chatonline Forum
Myanmar Native Forum
engineer forum good
Myanmar Chelsea Fan
Search Engines ရှာဖွေရေးယန္တယားများ
A A Art
New British Artists
Arts Council NIreland
Hot Myanmar Ning Sites
GTU Online Friends
Dagon University Friends
MTU Online Students
Our Dream4All
M Youth Media Club
Mha Hip Hop
Mm Graffiti Writers
Yangon Hip Hop
Dubai Mm Asso
Mm Multiplys Zone
Kyauk Pa Daung
Mm Digital Artists
Mm Blogger Society
Online Best Games
Game of Free
Gam co uk
ReadMoe “Web Link .....”